हाम्रा नेताहरुको पनि कमजोरी देखिएकै हो :: अमिक शेरचन (नेता, एमाओवादी) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:२७ English
हाम्रा नेताहरुको पनि कमजोरी देखिएकै हो :: अमिक शेरचन (नेता, एमाओवादी)
० एकीकृत नेकपा माओवादी अहिलेको अवस्थामा चुनाव चाहँदैन भनेर धेरैले भनिरहेका छन्, यो कुरा के हो ?
– कसैले पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भनेर भन्यो भने त्यो पत्याउने कि नपत्याउने ? एमाओवादीले चुनाव चाहेको छैन भन्नु र घाम त पश्चिमबाट उदाउन थालेछ भनी पत्याउनु उस्तै कुरा हो ।
० तपाईंको पार्टीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पश्चिमाहरू चुनाव भाँड्न लागिपरेका छन् भनी भन्नुको तात्पर्यचाहिँ के होला त ?
– विदेशीहरूको चलखेल नेपालमा यतिबेला बढेको कुरा सत्य हो । एउटासँग एउटा कुरा गरिदिने र अर्कोसँग भेटेर अर्कै कुरा गरिदिने धेरै विदेशी भेटिन थालिएको छ । यस्तो किन गरिँदैछ भन्ने जिज्ञासा सबैमा जाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तै परिवेशमाथि विचार गरेर उपाध्यक्षजीले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हुनसक्छ । तर, मेरो विचारमा चुनाव भाँडिन लाग्यो भनेर अरूलाई औंल्याउनुभन्दा हाम्रै कारणले चुनाव हुन नसकेको हो र अब चुनाव भएन भने पनि हाम्रै कारणले नहुने हो । जहाँसम्म नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको कुरा छ, यो त अहिले होइन २–३ सय वर्षअघिदेखि नै हुँदै आएको कुरा हो । ०५९ असोज १८ मा देउवा सरकार अपदस्त गरिएदेखि नेपालमा जुन आन्दोलन सुरु भएको थियो– त्यो आन्दोलन नगर्नका लागि हामी आन्दोलनकारीहरूमाथि वाह्य दबाव त्यत्तिकै थियो, आन्दोलनको अन्त्यतिर सम्झौता नगर्न भनेर पनि त्यत्तिकै दबाव आएको थियो, गणतन्त्र घोषणा नगर्नका लागि पनि त्यस्तै दबाव थियो । तर, नेपालको समस्या नेपालीले नै हल गर्न सक्छौँ भन्ने इच्छाशक्ति देखाएर हामीले समाधान ग¥यौँ । यो स्थिति त नेपालमा हरदम छ । बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको कुरा कुनै नयाँ होइन ।
० तपाईंको भनाईको मतलव नेपालीहरू मिलेमा सबै समस्या आफैले समाधान गर्न सकिन्छ, वाह्य सहयोग दरकार पर्दैन, हो ?
– हो । हामी मिले हामीले नै समस्याहरू हल गर्न सक्छौँ र गर्नु पनि पर्छ । आफ्नो इच्छाशक्ति प्रवल तुल्याउन नसक्ने अनि बेकारमा किन विदेशीलाई मात्र दोष दिइरहने ?
० संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउने सवालमा तपाईंहरू किन चुकिरहनुभएको छ त ?
– यस सवालका सन्दर्भमा मैले धेरै पटक भनिसकेँ कि बहुमतीय सिस्टम नेपालका लागि अफाप भइसकेको सिस्टम हो । बहुमतीय प्रणालीमा अनेक अस्वाभाविक र अपवित्र गठबन्धन गरेर अर्कोलाई तल खसाल्ने अस्वस्थ क्रियाकलाप निकै हुने भएकोले राजनीति सधैँ अस्थिर रहन्छ । तसर्थ, सदाकाल अस्थिरता निम्त्याउने यो बहुमतीय व्यवस्था नअँगालौँ, सहमतीय प्रणाली नताडौँ भन्ने गर्छु म । सहमतीय प्रणाली त्याग्नुको परिणामस्वरुप अहिले निर्वाचनको वातावरण पनि खल्बलिने या खल्बल्याउने काम भइरहेको छ । यसरी वातावरण खल्बलिनुमा कुनै दल वा नेताविशेषको भन्दा पनि बहुमतीय प्रणालीकै दोष देख्छु म ।
० सहमतिको प्रयास लम्ब्याइरहनुभन्दा पुरानै ऐनअनुसार चुनाव गराउनु उचित हुने तर्कहरू पनि उठेका छन्, यो सम्भव होला ?
– यो संविधानसभाको निर्वाचन हो, त्यो पनि पहिलेको संविधानसभाले पूरा गर्न नसकेका कार्यहरू पूरा गर्नका लागि गर्न लागिएको चुनाव हो । त्यसैले यहाँ कुनै पनि नयाँ कुराहरू नझिकौँ, पुरानै ऐन–नियम वा प्रक्रिया अवलम्वन गरेर काम सम्पन्न गरौँ भनेर त मैले उहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु । निर्वाचन आयोगले जुन मस्यौदा बनाएर ल्यायो, त्यतिबेलै नेताहरूले नयाँ प्रावधानहरू राख्दै नराखौँ भनेर भन्न सक्नुपथ्र्यो । यदि त्यसो गरिएको भए आज यत्रो लफडै रहने थिएन ।
० भनेपछि तपाईं ‘थ्रेस होल्ड’को विपक्षमा हुनुकुन्छ, होइन त ?
– पक्ष र विपक्षको कुरै नगरौँ न ! चुनाव गराउनु छ, कसो गर्दा चुनाव सम्भव हुन्छ त्यतापट्टि लाग्नु प¥यो नि । निर्वाचन ऐनमा नयाँ–नयाँ प्रावधान थप्नुभन्दा सदस्य सङ्ख्या ४ सय ९१ गर्नेबाहेक अरू केही नचलाऔँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय हो । निर्वाचन आयोगका तर्फबाट ल्याइएको प्रस्ताव दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेरै ल्याइएको भनिएको छ । यस्तो हो भने नेताहरूको कमजोरी देखियो, सहमति जनाउन हुँदैनथ्यो । निर्वाचन आयोगले पनि संसदीय निर्वाचनको लागि चाहिने खालको एैन मस्यौदा गरेर ल्याउनु हुन्नथ्यो, त्यो गल्ती भयो । निर्वाचन आयोगमा छलफलका लागि जाँदा त्यहाँ ‘हुन्छ’ भन्ने अहिलेचाहिँ ‘हुँदैन’ भनेका हुन् भने हाम्रा नेताहरूले पनि गल्ती गरेकै ठहर्छ । हाम्रो पार्टीको लाइन त थ्रेस होल्ड राख्ने भन्ने थिएन, मलाई यत्ति थाहा छ ।
० तपाईंहरू मोहन वैद्य पक्ष चुनावमा नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, त्यसैले चुनावी वातावरण खल्बल्याउने एमाओवादीको नियत छ भन्ने जनआवाज छ, के भन्नुहुन्छ ?
– यो पनि हत्यन्त हास्यास्पद कुरा भयो । चुनावमा आइदिनु प¥यो, वातावरण बिथोल्ने काम गर्न भएन भन्ने अनुरोधका साथ मोहन वैद्यसँग पटक–पटक म आफैँ गएर कुरा गरिरहेको छु । प्रचण्ड कमरेड पनि आफैँ गएर उहाँसँग कुरा गरिरहनुभएको छ । सकभर पार्टी नै एक गरेर जाऔँ, नभए पनि कार्यगत एकता गरेर मिलीजुली चुनाव लडौँ भन्ने हाम्रो आग्रह रहँदैआएको छ वैद्यजीहरूसँग । उहाँहरूले पनि हाम्रा सर्तहरूमा पोजेटिभ्ली हेरिए चुनावमा जान नसकिने होइन भनी सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । सत्य कुरा यो हो, अब यसलाई बङ्याएर कसैले आफूअनुकुल कुरा गर्छ भने हामी के गर्न सक्छौँ र ?
० वैद्यजीहरू चुनावमा आए भने त एमाओवादीको भोट काटिन्छ, तपाईंहरूलाई घाटा पर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ, यो ठिक होइन त ?
– यस्तो वेतुकको तर्क पनि कहीँ ठिक हुन्छ ? उहाँहरू चुनावमा आए हामीसँग नै कार्यगत एकता हुने हो, अरूसँग त त्यस्तो एकता सम्भव छैन उहाँहरूको । त्यसैले हामी उहाँहरूले चुनाव वहिष्कार गरेको होइन भाग लिएको हेर्न चाहन्छौँ । अहिलेको परिवेशमा चुनाव वहिष्कार गरेर लाभ होइन धेरै नै हानी हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि राम्रैसँग बुझ्नुभएको छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
० यस्तो हो भने तपाईंका पार्टी अध्यक्षले गहन पहल किन नगर्नुभएको त वैद्य पक्षलाई चुनावका लागि सहमत गराउन ? काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूले त प्रचण्डमाथि यस्तै आरोप लगाइरहेका छन् कि उहाँले वैद्यलाई फकाउने होइन भड्काउने व्यवहार गरिरहनुभएको छ ?
– प्रचण्डजीले वैद्यजीलाई भड्काउने कुनै त्यस्तो व्यवहार गर्नुभएको छैन । बरु काङ्ग्रेस–एमालेहरू नै वैद्यजीहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भनी भ्रामक कुरा गरेर उहाँहरूलाई यदाकदा अल्मल्याउन खोजिरहेका छन् ।
० प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको कुरामै वैद्यजीहरूको मुख्य आपत्ति छ भने तपाईंहरूसँग कसरी कार्यगत एकता गर्ला त नेकपा–माओवादीले ?
– यो कुराचाहिँ अलिक समस्याकै रुपमा रहेको छ । तर, उहाँहरूले नबुझेको या बुझपचाएको कुरा के छ भने प्रधानन्यायाधीश पदबाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनेवित्तिकै जो प्रधानन्यायाधीश हुन्छ त्यही व्यक्तिलाई फेरि चुनावी सरकारको लगाम सुम्पिनुपर्ने हुन्छ । किनकि, ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिने’ भनेर लेखिसकियो । यसको मतलब खिलराज रेग्मीलाई जिम्मेवारी दिएको नभई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको हो । यसप्रकार रेग्मीले छोडे अर्का शर्मा आउन सक्छन् । यो त सुल्झिने कुरा भएन नि, त्यसैले यस्तो अडान उहाँहरूले छाड्नु वेश हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क रहँदैआएको छ ।
० यस्तो सहमति किन गरेको त, सहमति फेरेर अर्को लेखिदिए होला नि त ?
– यो पनि दलहरूका तर्फबाट कमजोरी भएकै हो । ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व’ भनी तोक्नु हुन्थेन । तर, अब जे भयो–भयो, केही महिनाका लागि यही सरकारलाई मान्दिँदा उहाँहरूको पनि केही बिग्रने होइन । सुरुक्क चुनावमा गए सबै समस्या समाप्त हुन्थ्यो । रेग्मीको राजीनामाका लागि फेरि ऐननियम संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता अनेक लफडा गरिरहनुभन्दा खुरुक्क चुनावमा जानु नै सबैका लागि श्रेयस्कर हुन्छ ।
२८ जेष्ठ २०७०, मंगलवार ०७:३३ मा प्रकाशित